आश्विन ७, २०७६ ०२:५६:१८
विवाह पछि जीवनसाथी पाइने भएकोले विवाहलाई निकै महत्वपूर्ण क्षण मान्ने गरिन्छ । जीवनसाथी कस्तो छ भन्ने कुराले सफलता र असफलतालाई निर्धारण गर्दछ । त्यसकारण हतारमा विहे गरेर फुर्सदमा पछुताउनु भन्दा आफ्नो हुनेवाला जीवनसाथी छान्नुपूर्व उसँग यी ६ गुण छन् कि छैनन् भनेर जान्नु आवश्यक हुन्छः
१. आधारभूत मान्यता वा विचार मिल्ने व्यक्ति
भनिन्छ, विचार मिलेपछि धेरै कुरा मिल्छ । जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान भएका व्यक्तिबीच टकराव तथा विवाद कम हुन्छ । त्यस कारण दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाउनका लागि केही महत्वपूर्ण कुरामा महिला र पुरुषबीच समान दृष्टिकोण हुनु आवश्यक हुन्छ । विचार तथा मूल्यमान्यता मिल्ने व्यक्तिलाई मात्रै आफ्नो जीवनसाथी चुन्नुहोस्
२. भावनात्मकरुपमा परिपक्क व्यक्ति
भावनात्मकरुपमा परिपक्क मानिस आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने, विवेकशील तथा आफ्ना भावनालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने हुन्छन् । यसबाहेक यस्ता व्यक्तिहरु परिवर्तित वातावरणमा आफूलाई घुलमिल गराउन तथा जीवनमा आईपर्ने निराशा, तनाव तथा विवादलाई पार लगाउन सक्दछन् । परिपक्क व्यक्तिले आफ्नो जीवनलाई सन्तुलनमा राख्न सक्दछन् भने जीवनमा आइपर्ने विभिन्न समस्यालाई पनि सामना गर्न सक्दछन् । जीवन यात्राको कठिन क्षणमा यस्ता व्यक्तिले सहयोग र हौसला दिने गर्दछन् । त्यसकारण यो गुणलाई पनि ख्याल गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
३. आफ्नो गल्ती स्विकार गर्ने र अरुको कमजोरीलाई सहजरुपमा लिने व्यक्ति
मानिस गल्ती गर्ने प्राणी हो । त्यसैले हामीसबैले गल्ती गर्दछौं । तर आफ्नो गल्तीलाई महसुस नगर्ने भन्दा गर्ने व्यक्तिलाई उत्तम व्यक्ति मान्ने गरिन्छ । त्यस्तै अरुको गल्तीलाई पनि सहजै लिने र क्षमा गर्न सक्ने गुण पनि एउटा डिभाइन वा दैवी गुण नै हो । राम्रो गुणलाई प्रशंसा गर्ने र कमजोर पक्षलाई स्विकार गर्न सक्ने मानिस जीवनसाथी भएमा दाम्पत्य जीवनको रंग नै परिवर्तन हुन्छ । त्यसैले पनि भनिएको होला, ‘ Love is acceptance’ भनेर ।
४. विवाद वा झगडालाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति
हरेक सम्बन्धमा विवाद तथा झगडालाई अभिन्न अंग मान्ने गरिन्छ । सम्बन्धलाई दीर्घकालीन बनाउन सामान्य विवाद तथा झगडा हुनु आवश्यक पनि छ । तर विवाद तथा झगडालाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यो चर्किदै जान्छ । फलस्वरुप सम्बन्ध बिग्रन वा टुट्न सक्दछ । विशेषगरी एकआपसमा छलफल गर्दा चर्को चर्को कराउने बानी भएका जीवनसाथी भएमा रीस तथा निराशा बढ्ने र निकटना घट्दै जाने गर्दछ । यही भएर नै एउटा सफल दाम्पत्य जीवनका लागि आपसी कुराकानी वा सञ्चार महत्वपूर्ण मानिएको हो । विवाद तथा झगडालाई कम गर्ने उपाय भनेको मीठो बोली तथा बचन नै हो । त्यसकारण झगडा वा विवाद भएको बेलामा नरिसाईकन मीठो बोली र मधुर बचन प्रयोग गर्ने व्यक्ति जीवनसाथीको रुपमा छनौट गर्नुपर्दछ ।
५. इमान्दार र विश्वासिलो व्यक्ति
सबै सम्बन्धहरु विश्वास र इमान्दारितामा अडिएका हुन्छन् । पटक पटक झूठ बोल्ने र धोका दिने मानिसले जीवनलाई नर्क बनादिन सक्दछन् । त्यसैले जीवनलाई स्वर्ग जस्तै बनाउन चाहनुहुन्छ भने इमान्दार र विश्वासिलो मानिसलाई आफ्नो जीवनसाथीको रुपमा छान्नुहोस् ।
६. सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा दिने व्यक्ति
आजभोलि हरेक सम्बन्ध क्षणिक तथा अल्पकालीन हुने गरेका छन् । सम्बन्धलाई सामान्य वस्तुको रुपमा लिने गर्नाले यस्तो भएको हो । आफ्नो जीवनसाथी भन्दा अन्य कुरालाई बढी जोड दिनु यसको अर्को कारण हो । पैसा, प्रतिष्ठा तथा काम आवश्यक कुरा हुन् । तर यी कुराले आफ्नो दाम्पत्य जीवनलाई ओझेलमा पार्नु हुन्न भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्दछ । त्यसैले सम्बन्धलाई बढी महत्व दिने व्यक्तिलाई जीवनसाथी चुन्नुहोस् ।
प्रकाशित मिति: आइतवार, भदौ ८, २०७६, ०१:०८:००
ट्रकको ठक्करबाट बालकको मृत्यु आश्विन ७, २०७६ 7